परमेश्‍वरको काम र वचन तिमीहरूको स्वभावलाई बदली गराउने उद्देश्यको निम्ति हुन्; उहाँको लक्ष्य तिमीहरूलाई केवल उहाँको काम र वचन बुझ्ने वा जान्ने तुल्याउनु मात्रै होइन। त्यो पर्याप्त छैन। तँ बुझ्ने क्षमता भएको व्यक्ति होस्, त्यसैले तँलाई परमेश्‍वरको वचन बुझ्न कुनै कठिनता हुनु हुँदैन, किनभने परमेश्‍वरको अधिकांश वचन मानव भाषामा लेखिएको छ, अनि उहाँले धेरै सरल रूपमा बोल्नुहुन्छ। उदाहरणको निम्ति, तैँले जे बुझेको र अभ्यास गरेको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ सो जान्न तँ पूर्ण रूपले सक्षम छस्; यो बुझ्‍न सक्‍ने क्षमता भएको एउटा सामान्य व्यक्तिले गर्न सक्‍ने कुरा हो। निश्‍चित रूपमा, परमेश्‍वरले वर्तमान चरणमा बोलिरहनुभएका वचनहरू खास गरेर स्पष्ट तथा पारदर्शी छन्, अनि मानिसहरूले विचार नगरेका धेरै कुराहरू, साथै सबै प्रकारका मानव अवस्थाहरू परमेश्‍वरले औँल्याइरहनुभएको छ। उहाँका वचनहरू सर्व-व्यापक छन्, अनि पूर्णिमाको प्रकाश जस्तै स्पष्ट छन्। त्यसैले, अहिले मानिसहरूले धेरै विषयहरू बुझ्दछन्, तर अझै केही कुरा हराइरहेको छ—मानिसहरूले उहाँको वचनलाई अभ्यास गर्ने कुरा। मानिसहरूले सत्यताका सबै पक्षहरूलाई विस्तृत रूपमा अनुभव गर्नैपर्छ, तिनीहरूलाई जे उपलब्ध गराइन्छ त्यसलाई ग्रहण गर्नको निम्ति केवल पर्खिरहनुको सट्टा तिनीहरूले त्यसलाई अझै विस्तृत रूपमा छानबिन गर्ने र खोजी गर्ने गर्नुपर्छ; नत्रभने तिनीहरू परजीवीभन्दा अलि बढी मात्रै हुन्छन्। तिनीहरूले परमेश्‍वरको वचन जान्दछन्, तापनि त्यसलाई अभ्यास गर्दैनन्। यस्तो प्रकारको मानिसले सत्यतालाई प्रेम गर्दैनन् अनि आखिरमा तिनीहरूलाई हटाइनेछ। १९९० को दशकको पत्रुस जस्तै हो, जसको अर्थ तिमीहरूमध्ये हरेकले परमेश्‍वरको वचनलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, तिमीहरूको अनुभवहरूमा साँचो प्रवेश हुनुपर्छ अनि परमेश्‍वरसँगको तिमीहरूको सहकार्यमा अझ धेरै र अझ ठूलो अन्तर्दृष्टि हासिल गर्नुपर्छ जुन तेरो आफ्नै जीवनको निम्ति सधैँभरि वृद्धि भएर जाने सहायता हुनेछ। यदि तिमीहरूले परमेश्‍वरका थुप्रै वचनहरू पढेका छौ तर केवल पाठको अर्थ मात्र बुझ्छौ अनि तिमीहरूमा परमेश्‍वरको वचन सम्बन्धमा आफ्ना व्यवहारिक अनुभवहरूमार्फत आउने प्रत्यक्ष ज्ञानको कमी छ भने तैँले परमेश्‍वरको वचन बुझ्ने छैनस्। जहाँसम्म तेरो सवाल छ, परमेश्‍वरको वचन जीवन होइन, केवल जीवनरहित अक्षरहरू हुन्। अनि यदि तँ केवल जीवनरहित अक्षरहरू पालना गर्दै जिउँछस् भने तैँले परमेश्‍वरको वचनको सार राम्ररी बुझ्न सक्दैनस्, न त तैँले उहाँको इच्छा नै बुझ्नेछस्। तैँले उहाँको वचन तेरा वास्तविक अनुभवहरूमा अनुभव गर्छस् भने मात्र परमेश्‍वरको वचनको आत्मिक अर्थ आफै तँतर्फ खोलिनेछ, अनि अनुभवद्वारा मात्रै तैँले धेरै सत्यताहरूको आत्मिक अर्थ बुझ्न र परमेश्‍वरको वचनका रहस्यहरूको साँचो खोल्न सक्छस्। यदि तैँले यसलाई अभ्यासमा लगाउँदैनस् भने उहाँको वचन जतिसुकै स्पष्ट भएतापनि तैँले बुझेको कुरा सबै रित्ता अक्षरहरू र सिद्धान्तहरू हुन्छन् जुन तेरो निम्ति धार्मिक नियमहरू भएका छन्। के फरिसीहरूले गरेको यही नै होइन र? यदि तिमीहरूले परमेश्‍वरको वचन अभ्यास र अनुभव गर्छौ भने यो तिमीहरूको निम्ति व्यवहारिक बन्छ; यदि तैँले यसलाई अभ्यास गर्न खोज्दैनस् भने परमेश्‍वरको वचन तेरो निम्ति तेस्रो स्वर्गको दन्त्यकथा भन्दा केही बढी मात्रै हुन्छ। वास्तवमा, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्ने प्रक्रिया भनेको तिमीहरूले उहाँको वचनलाई अनुभव गर्नुको साथै उहाँद्वारा तिमीहरूलाई हासिल गरिने प्रक्रिया हो अथवा यसलाई अझ स्पष्टसित भन्नुपर्दा, परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नु भनेको उहाँको वचनको ज्ञान र बुझाइ प्राप्त गर्नु र उहाँको वचनलाई अनुभव गर्नु र जिउनु हो; परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्नुपछाडिको वास्तविकता त्यही नै हो। यदि तिमीहरूले परमेश्‍वरमा विश्‍वास गर्छौ अनि परमेश्‍वरको वचनलाई तिमीभित्र भएको केही कुरा जस्तै गरी अभ्यास गर्न नखोजिकनै अनन्त जीवनको आशा गर्छौ भने तिमीहरू मूर्ख हौ। यो त भोजमा गएर केवल भोजनलाई हेर्नु र स्वादिष्ट कुराहरूलाई केही नचाखेर तिनीहरूको नाम कण्ठस्थ गर्नु जस्तो मात्रै हुनेछ। के त्यस्तो मानिस मूर्ख हुँदैन र?
मानिसमा आफ्नो काम गर्नको निम्ति परमेश्‍वरसित सीमित समय छ, त्यसैले यदि तैँले उहाँसित सहकार्य गर्दैनस् भने के परिणाम आउन सक्छ र? किन तिमीहरूले उहाँका वचनहरू बुझिसकेपछि तिमीहरूले त्यो पालन गरेको परमेश्‍वर सधैँ चाहनुहुन्छ? किनभने परमेश्‍वरले उहाँका वचनहरू तिमीहरूलाई प्रकट गर्नुभएको छ र तिमीहरूको अर्को कदम वास्तवमा त्यसलाई पालन गर्नु हो। जब तिमीहरूले यी वचनहरू अभ्यास गर्छौ, परमेश्‍वरले अन्तर्दृष्टि दिने र मार्गदर्शन दिने काम गर्नुहुनेछ। यसरी नै यो काम गरिनुपर्छ। परमेश्‍वरको वचनले मानिसलाई जीवनमा फल्दोफुल्दो हुने तुल्याउँछ र यसमा कुनै त्यस्ता तत्वहरू हुँदैनन् जसले मानिसलाई विचलित वा निष्क्रिय हुने तुल्याउँछ। तैँले भन्छस् तैँले परमेश्‍वरको वचन पढेको छस् र त्यसलाई अभ्यास गरेको छस्, तर तैँले अझै पवित्र आत्माबाट कुनै काम प्राप्त गरेको छैनस्। तेरा वचनहरूले केवल एउटा बालकलाई मात्रै मूर्ख बनाउन सक्छ। अरू मानिसहरूले तेरो मनसाय ठीक छ वा छैन भनी नजान्लान् तर के परमेश्‍वरले जान्‍नुहुन्छ भन्‍ने सम्‍भव छैन भन्‍ने तँलाई लाग्छ? कसरी अरू मानिसहरूले परमेश्‍वरको वचन अभ्यास गर्छन् अनि पवित्र आत्माद्वारा अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्छन्, तापनि तैँले उहाँको वचन अभ्यास गर्छस् तर पवित्र आत्माको अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्दैनस्। के परमेश्‍वरसित भावनाहरू छन्? यदि तेरा मनसायहरू साँच्चिकै सही छन् अनि तँ सहकार्य गर्न तयार छस् भने, परमेश्‍वरका आत्मा तँसित हुनुहुनेछ। केही मानिसहरू सधैँ आफ्नै झण्डा खडा गर्न चाहन्छन् तर परमेश्‍वरले किन तिनीहरूलाई उठ्न र मण्डलीलाई अगुवाइ गर्न दिनुहुन्न? कतिपय मानिसहरूले केवल आफ्नो कार्य पूरा गर्छन् र आफ्नो कर्तव्य सम्पन्न गर्छन्, अनि तिनीहरूले थाहै नपाई तिनीहरूले परमेश्‍वरको स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका हुन्छन्। यो कसरी हुनसक्छ? परमेश्‍वरले मानिसको हृदयको अन्तस्करणलाई जाँच गर्नुहुन्छ र सत्यतालाई अनुसरण गर्नेहरूले ठीक मनसाय राखेर त्यसो गर्नुपर्छ। जसको ठीक मनसाय छैन, तिनीहरू दृढ भई खडा रहन सक्दैनन्। मूलभूत रूपमा, तिमीहरूको लक्ष्य परमेश्‍वरको वचनलाई तिमीहरूभित्र प्रभाव पार्न दिनु हो। अर्को शब्दमा, यो भनेको तिमीहरूले परमेश्‍वरको वचनको अभ्यासमा साँचो बुझाइ प्राप्त गर्नु हो। शायद, परमेश्‍वरको वचनलाई बुझ्ने तिमीहरूको क्षमता कमजोर होला, तर जब तिमीहरूले परमेश्‍वरको वचनलाई अभ्यास गर्छौ, तब उहाँले त्यस अपूर्णतालाई निवारण गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तिमीहरूले केवल धेरै सत्यताहरू मात्र जान्ने होइन बरु तिनीहरूलाई अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। यो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो करा हो जसलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। येशूले आफ्नो साढे तेत्तीस वर्षीय उमेरमा धेरै अपमानहरू अनि असाध्यै कष्ट सहनुभयो। उहाँले ठूलो कष्ट सहनुभयो किनकि उहाँले केवल सत्यतालाई अभ्यास गर्नुभयो, सबै कुराहरूमा परमेश्‍वरको इच्छा पालन गर्नुभयो, र परमेश्‍वरको इच्छालाई मात्र वास्ता गर्नुभयो। यदि उहाँले सत्यतालाई अभ्यास नगरीकन त्यसलाई जान्नु मात्र भएको भए उहाँले यो कष्ट भोग्नुहुने थिएन। यदि येशूले यहूदीहरूका शिक्षाहरूलाई अनुसरण गर्नुभएको भए अनि फरिसीहरूलाई पछ्याउनुभएको भए, उहाँले कष्ट सहनुहुने थिएन। तैँले येशूका कार्यहरूबाट सिक्नुपर्छ कि मानिसमाथि परमेश्‍वरको कामको प्रभावकारिता मानिसको सहकार्यबाट आउँछ, अनि यो कुरा तिमीहरूले पहिचान गर्नैपर्ने चीज हो। यदि उहाँले सत्यतालाई अभ्यास नगर्नुभएको भए, के येशूले क्रूसमा कष्ट भोग्नुभएझैँ कष्ट भोग्नुहुन्थ्यो र? यदि परमेश्‍वरको इच्छाअनुसार उहाँ नचल्नुभएको भए के उहाँले त्यस्तो पीडादायी प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो र? त्यसकारण, तिमीहरूले सत्यताको अभ्यासको खातिर कष्ट भोग्नुपर्छ; व्यक्तिले भोग्नुपर्ने कष्ट नै यही हो।
अघिल्लो: परमेश्‍वरले मानिसलाई प्रयोग गर्नुहुने सम्बन्धमा
अर्को: मुक्ति पाउने व्यक्ति त्यो हो जो सत्यको अभ्यास गर्न इच्छुक हुन्छ